किशोरावस्थामै सुन्निन्छ पाठेघर, किन यस्तो हुन्छ र कसरी पत्ता लगाउने ? - GyanBigyan
4 months ago 886 Views
महिलाहरुसँग जोडिएका थुप्रै स्वास्थ्य समस्यामध्ये पाठेघरको समस्या पनि एक हो। विवाहित महिला हुन् वा अविवाहित किशोरी सबैमा पाठेघरको समस्या भएको पाइन्छ। पछिल्लो तथ्याकंलाई हेर्ने हो भने १० महिलामध्ये ७ जनामा पाठेघरको समस्या भएको पाइन्छ।
के हो पाठेघर सुन्निने समस्या ? आजभोलि किशोरावस्थामा नै पाठेघर फुल्ने र सानासाना सिस्ट बन्न सुरु भएको पाइन्छ। यस्ता समस्या हुनुको पछाडि दैनिक जीवनयापन गर्ने शैलीहरु भएको पाइन्छ। बाहिरको तारेको, भुटेको चिल्लो खाना, शारीरिक व्यायामको कमि, तनावले पाठेघर फुल्न मद्दत गर्ने गर्छ। जसले गर्दा महिनावारीमा गडबढी हुन सुरु हुन्छ। जसले गर्दा बाझोपन र पाठेघरको क्यान्सर जस्ता रोगको खतरा बढाउँछ।
के कारणले फुल्छ पाठेघर ? सामान्यतयाः ५०/५५ वर्ष नाघेका महिलामा मात्रै पाठेघरमा समस्या पैदा हुन्छ भन्ने प्रचलन छ । उनीहरुमा महिनावारी बन्द भएको कारण यस्ता समस्या आउँछन् । तर २० देखि ४० वर्षका महिलामा यस्तो समस्या आउनुका कारणहरुमा कब्जियत, ग्यास्ट्रिक, शारीरिक व्यायाम नगर्नु, माटोपन, धेरै कसिलो कपडा लगाउनु, धेरै औषधिको सेवन, धेरै व्यायाम गर्ने आदि हुन्।
कसरी पत्ता लगाउने ? लगातार पेट बढेमा, पेटमा दुख्ने, ग्यास भरिने र कब्जियत भएमा, कम्मर दुखाई बढेमा, यौनाङ्ग चिलाउने र पोल्ने भएमा, यौनसम्पर्क राख्दा पीडा भएमा, बारम्बार पिसाब आएमा, पखाला र बान्ता भएमा ।
Don't Miss it नङमा पनि पर्छ ढुसी, के हुन् लक्षण र कसरी पाउने छुटकारा ?
Up Next गर्भवती महिलाले यी ५ कुरा ख्याल राखे सजिलै जन्मिन्छ बच्चा, गर्नुपर्दैन् अप्रेशन
विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनअनुसार संसारभर पेटभर खान नपाउनेको संख्या धेरै नै छ । करोडौँ नागरिक कुपोषणका कारण मृत्युको मुखमा पर्ने…
घरैमा यसरी बनाउनु केमिकल रहित मञ्जन
बिहान-बेलुका दाँत सफा गर्नका लागि अधिकांश व्यक्ति टुथपेस्टको प्रयोग गर्छन् । तर, हामीले सोचेका छैनौ कि बजारमा पाइने टुथपेस्टमा कति…
10 months ago 402 Views
चामल पखालेको पानीले यसरी धुनुहोस् अनुहार, पाउनुहुनेछ यस्तो नतिजा
छालाको लागि उमालिएको चामलको पानी अर्थात् माड गुणकारी हुन्छ। उमालिएको चामलको पानी वा माड कुनै अनौठो कुरा होइन। हामी दिनमा…
युवा अवस्थामै किन दुख्छ श’रीर ? यसरी गर्नुहो’स् उपचार
डाइबिटिज एक बिमारी हो । यसमा ब्लड ग्लुकोजलेवल बढ्ने गर्दछ र यसले इन्सुलिन हर्मोन निकाल्नमा कम अथवा बन्द गराइदिने गर्दछ…
अनुहार चम्काउन मानिसले निकै रकम खर्च गर्छन्। व्युटी पार्लर, चिकित्सक लगायतका धाउँदा धाउँदा पनि अनुहारमा चमक आउँदैन। तर कतिपय यस्ता…
10 months ago 1620 Views
कस्तो छ तपाईको ओछ्यान ? यस्तो हुनु पर्छ अनि शान्ति, सौभाग्य र स्वास्थ्य मिल्छ, विज्ञान र धर्ममा आधारित
कुनै पनि घरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थान भनेकै ओछ्यान हो । भनिन्छ, हरेक व्यक्तिको नीजि जीवन ओछ्यान मै विकसित हुन्छ ।…